2 Ndị Eze 1:1-18
1 Moab+ wee malite inupụrụ Izrel isi+ mgbe Ehab nwụsịrị.+ 2 Ehazaya wee si n’ihe e ji kpachie oghere dị n’ọnụ ụlọ nke dị n’elu ụlọ+ ya na Sameria daa+ ma rịawa ọrịa. O wee zipụ ndị ozi, sị ha: “Gaanụ jụọ Belzibọb,+ bụ́ chi Ekrọn,+ ase+ ma m̀ ga-agbakekwa n’ọrịa a.”+ 3 Ma mmụọ ozi+ Jehova gwara Ịlaịja onye Tishbe,+ sị: “Bilie, gaa zute ndị ozi eze Sameria, sị ha, ‘Ọ̀ bụ n’ihi na e nweghị Chineke+ ma ọlị n’Izrel ka unu ji aga ịjụ Belzibọb, bụ́ chi Ekrọn, ase? 4 N’ihi ya, nke a bụ ihe Jehova kwuru: “Ị gaghị esi n’ihe ndina ahụ ị rịgooro rịdata, n’ihi na ị ga-anwụrịrị.”’”+ Ịlaịja wee pụọ. ụọị 5 Mgbe ndị ozi ahụ laghachikwutere ya, ọ sịrị ha ozugbo: “Gịnị mere unu ji laghachite?” 6 Ha wee sị ya: “E nwere otu nwoke gbagotere zute anyị, o wee sị anyị, ‘Laanụ, laghachikwurunụ eze ahụ zipụrụ unu, sịkwanụ ya: “Nke a bụ ihe Jehova kwuru,+ ‘Ọ̀ bụ n’ihi na e nweghị Chineke ma ọlị n’Izrel ka i ji zie ozi ka a gaa jụọ Belzibọb, bụ́ chi Ekrọn, ase? N’ihi ya, ị gaghị esi n’ihe ndina ahụ ị rịgooro rịdata, n’ihi na ị ga-anwụrịrị.’”’”+ 7 O wee sị ha: “Olee otú nwoke ahụ dị nke gbagotere zute unu wee gwa unu ihe ndị a?” 8 Ha wee sị ya: “Ọ bụ nwoke yi uwe e ji ajị anụ mee,+ o kekwara ájị̀ akpụkpọ anụ n’úkwù ya.”+ Ọ sịrị ozugbo: “Ọ bụ Ịlaịja onye Tishbe.” 9 O wee zigara ya onyeisi ndị agha iri ise na ndị agha iri ise ya.+ Mgbe ọ gbagokwuuru ya, ọ nọ ọdụ n’elu ugwu. O wee sị ya: “Onye nke ezi Chineke,+ eze kwuru, sị, ‘Gbadata.’” 10 Ma Ịlaịja zara onyeisi ndị agha iri ise ahụ, sị: “Ọ bụrụ na m bụ onye nke Chineke, ka ọkụ+ si n’eluigwe daa rechapụ gị na ndị agha iri ise gị.” Ọkụ wee si n’eluigwe daa rechapụ ya na ndị agha iri ise ya.+ 11 O wee zigara ya ọzọ onyeisi ndị agha iri ise ọzọ na ndị agha iri ise ya.+ O wee zaa, sị ya: “Onye nke ezi Chineke, nke a bụ ihe eze kwuru, ‘Gbadata ọsọ ọsọ.’”+ 12 Ma Ịlaịja zara ha, sị: “Ọ bụrụ na m bụ onye nke ezi Chineke, ka ọkụ si n’eluigwe daa rechapụ gị na ndị agha iri ise gị.” Ọkụ Chineke wee si n’eluigwe daa rechapụ ya na ndị agha iri ise ya. 13 O wee ziga ọzọ onyeisi ndị agha iri ise nke atọ na ndị agha iri ise ya.+ Ma onyeisi ndị agha iri ise nke atọ ahụ rịgooro ma gbuo ikpere+ n’ala n’ihu Ịlaịja wee malite ịrịọ+ ya ka o meere ya amara wee sị ya: “Onye nke ezi Chineke, biko, ka mkpụrụ obi+ m na mkpụrụ obi ndị ohu gị iri ise a dịrị oké ọnụ ahịa+ n’anya gị. 14 Lee, ọkụ si n’eluigwe daa rechapụ+ ndị isi ndị agha iri ise nke mbụ na nke abụọ, tinyere ndị agha iri ise ha, ma ugbu a, ka mkpụrụ obi m dị oké ọnụ ahịa n’anya gị.” 15 Mmụọ ozi Jehova wee gwa Ịlaịja, sị: “Soro ya gbadaa. Atụla egwu n’ihi ya.”+ O wee bilie soro ya gbadakwuru eze. 16 O wee sị ya: “Nke a bụ ihe Jehova kwuru, ‘Ihe mere i ji ziga ndị ozi+ ka ha jụọ Belzibọb, bụ́ chi Ekrọn,+ ase ọ̀ bụ n’ihi na e nweghị Chineke ma ọlị n’Izrel bụ́ onye a ga-ajụ ase okwu ya? Ya mere, ị gaghị esi n’ihe ndina ahụ ị rịgooro rịdata, n’ihi na ị ga-anwụrịrị.’” 17 O wee nwụọ,+ dị ka okwu+ Jehova nke Ịlaịja kwuru si dị; Jehoram+ wee malite ịchị n’ọnọdụ ya, n’afọ nke abụọ nke ọchịchị Jehoram+ nwa Jehọshafat bụ́ eze Juda, n’ihi na ọ mụtaghị nwa nwoke. 18 Ma ihe ndị ọzọ Ehazaya+ mere, ọ̀ bụ na e deghị ha n’akwụkwọ+ ihe ndị mere n’ụbọchị ndị eze Izrel?